Ule Nduzi na Telecommuting | Martech Zone
Thursday, June 26, 2008 Tọzdee, Disemba 15, 2016 Douglas Karr
Na mgbede a, ezutere m Pat Coyle na ndị ọzọ Ndị na-a Smụ sịga na Pat's Open House na Obere Isi Isi Indiana.
Otu nnukwu mkparịta ụka mụ na Lalita Amos nwere, otu onye ndu ndu na ọkachamara n’ihe gbasara mmadụ, Ndị gụrụ akwụkwọ Purdue, na Adjunct Prọfesọ na NYU. Enwere m obi ụtọ nkere òkè na Lalita mgbe m gwara ndị Lalita okwu IABC banyere iji netwọkụ mmekọrịta n’ime ụlọ ọrụ.
Lalita rịbara ama na teknụzụ na-amanye ndị njikwa ka ha bụrụ ezigbo ndị isi. Otu n'ime ngwa ahịa nke nkwukọrịta bụ na ndị njikwa enweghị ike ịtinye igwe okwu, kpee otu ikpe site na ọdịdị ha ma ọ bụ gee asịrị ọfịs iji mepụta echiche ụgha. Nkwupụta igwe chọrọ ndị njikwa ka ha nwee nkwukọrịta nke ọma, jikwaa usoro iheomume n'ụzọ kwesịrị ekwesị, tụkwasị ndị ọrụ ha obi, tọọ ma jigide atụmatụ na ebumnuche arụmọrụ dị mma, yana ịlele arụmọrụ ndị ọrụ ha na n'ezie arụmọrụ!
Onweghi ihe ga - etinye onye ndu n’adịghị ike karịa imepụta mmemme nkwupụta ụda siri ike! Agbanyeghị na ọ na - eweta ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ, nnukwu onye ndu nwere ike ibugharị nrụpụta dị egwu site na mmemme dịka nke a, ma mekwa ka afọ ojuju ndị ọrụ na njigide dị. N'ezie, na price nke gas karịrị $ 4 / gal, e nwere ihe a ego ike dị ka nke ọma.
Tags: Lalita AmosLeadershiptele telefonwfhna-arụ ọrụ site n'ụlọ
Jun 27, 2008 na 7:47 AM
O yikarịrị ka ọ na-enwe obi abụọ maka ụlọ ọrụ ịnakwere nkwanye okwu ọ bụ ezie na egosila na ọ dị mma maka gburugburu ebe obibi, ndị ọrụ ọrụ ọgụgụ isi, ịghara ịkọwa awa na ịchịkwa onye ọrụ na-eweghachi ndụ ha. Ikekwe, ọ dị mkpa inwekwu ọzụzụ maka ndị isi na ndị njikwa maka otu esi ejikwa ndị ọrụ ọrụ igwe ọrụ ha.
Jun 27, 2008 na 8:55 AM
Enweghị m ike ikwenye karịa! Agwara m Lalita banyere isiokwu a nakwa na ọ nwere ike ịbụ 'akwụkwọ akụkọ kwesịrị ekwesị' wepụta akwụkwọ ozi na-enye nkọwa banyere uru nke ịkwado yana ụfọdụ ụkpụrụ atumatu, ozi gbasara iwu, wdg.
Jun 27, 2008 na 9:45 AM
Amachaghị m nke a. N'ebe ikpeazụ m rụrụ ọrụ, m nọ n'ọfịs na onye isi m na-ekwunye ọrụ na telecomm. Ọ jọgburu onwe ya. O nwere mmetụta nke ihe na-eme na ihe m na-eme nke na-ezighi ezi. Echere m na ọ nọ na-achọ iji micromanage si ebe dị anya, ọ na-ebutụ m mkpụrụ. Oge ruru na m na etinyekwu oge n’ịgbalị igosipụta na a na m arụ ọrụ m karịa ịrụ ọrụ n’ezie, akwụsịrị m.
Onye edemede Matthew Theriault-Thompson
Jun 27, 2008 na 10:24 AM
Enweghị nkwanye ùgwù pụtara, mana ma eleghị anya nke ahụ na-akwado mmalite mmalite… na ụdị ụdị a na-ekpughe adịghị ike na njikwa dara ogbenye. O di nwute na nke a, ị bụ onye nwetara "njedebe dị mkpirikpi", ma ọ bụrụ na ọgba aghara zuru oke n'etiti ndị agha gbasara mmekọrịta onye njikwa ahụ na ndị ọrụ ahụ, ọ ga-emeghe anya nke njikwa dị elu na nsogbu ndị njikwa ahụ… n'ọnụ ya ”bụ nkebi ahịrịokwu ahụ m kwenyere na ejiri mee ihe.
Olileanya mgbe ị hapụrụ, ị nwere ike ịga ihe ka mma?